မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ သံဃာ့တပ်ပေါင်းစုအဖွဲ့ကြီး ( A.B.M.A ): သတင်းဌာနများနှင့် မီဒီယာများမှ လေ့လာမှတ်သား သတင်းကဏ္ဍများ
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ဓာတ်ပုံ ဖြန့်ဝေသူ ပါတီဝင် ၄ ဦး ခေတ္တထိန်းသိမ်းခံရ အပြည့်အစုံသို့
ဒေါ်စုကို ပြစ်ဒဏ်ချသည့်အပေါ် အတိုက်အခံများ ကန့်ကွက် အပြည့်အစုံသို့
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် စီရင်ချက် ပြည်တွင်း ပြည်ပ နိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်များ ရှုတ်ချ အပြည့်အစုံသို့
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အယူခံဝင်ရန်ရှိ အပြည့်အစုံသို့
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို ချမှတ်သည့် အမိန့်အပေါ် NLD အဖွဲ့ဝင်များ အမြင်မတူကြ အပြည့်အစုံသို့
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို နေအိမ်အကျယ်ချုပ်ဖြင့် (၁) နှစ်ခွဲ ထိန်းသိမ်းဦးမည် အပြည့်အစုံသို့
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ပြစ်ဒဏ်ချခံရခြင်းအပေါ် သူတို့အမြင် အပြည့်အစုံသို့
နအဖ ဥက္ကဋ္ဌက ဒေါ်စုအပေါ် သက်ညှာခွင့်ပြုရန် ညွှန်ကြား အပြည့်အစုံသို့
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို နေအိမ် အကျယ်ချုပ် ပြန်ထား အပြည့်အစုံသို့
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ထောက်ခံသူများကို ယာယီထိန်းသိမ်း အပြည့်အစုံသို့
ဆန်ဖရန်စစ္စကိုဘေးဧရိယာက မြန်မာများနှင့် ထောက်ခံသူများက ဒေါ်စုအတွက် စုဝေးကြ အပြည့်အစုံသို့
ဒေါ်အောင်ဆန်း စုကြည်ကို နေအိမ်အကျယ်ချုပ်ဖြင့် ထောင်ဒဏ် ၁နှစ်ခွဲ ချမှတ် အပြည့်အစုံသို့
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အား နေအိမ်အကျယ်ချုပ် တနှစ်ခွဲချမှတ်၊ လူ ၇၀ ထက်မနည်း ဖမ်းဆီးခံခဲ့ရ အပြည့်အစုံသို့
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို ထောင်ဒဏ် ၁ နှစ်ခွဲနှင့် နေအိမ်တွင် ပြန်နေထိုင်ခွင့်ပေး အပြည့်အစုံသို့
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို နေအိမ်အကျယ်ချုပ် ၁၈လ အမိန့်ချချိန် မြင်ကွင်း အပြည့်အစုံသို့
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် (သို့မဟုတ်) သဇင်နီ - (အပိုင်း ၁၆) အပြည့်အစုံသို့
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် (သို့မဟုတ်) သဇင်နီ - (အပိုင်း ၁၇) အပြည့်အစုံသို့
ရေနံချောင်းနှင့် ပဲခူးရှိ အဖွဲ့ချုပ်ဝင်များ ဖမ်းဆီးခံရ အပြည့်အစုံသို့
ရိုဟင်ဂျာ ဒုက္ခသည်များ ပြန်ပို့ရေး ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် လိုလား အပြည့်အစုံသို့
နေရှင်နယ်လိဂ် ဘောလုံးပွဲများ ပြန်စတော့မည် အပြည့်အစုံသို့
အာဏာရှင်စနစ် ဘယ်လိုနိဂုံးချုပ်မလဲ အပြည့်အစုံသို့
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အား စီရင်ချက်ချမည့်နေ့နံနက် ငလျင်လှုပ် အပြည့်အစုံသို့
လှိုင်သာယာ စက်မှုဇုန်လုပ်ငန်း လည်ပတ်မှုကျဆင်း ပြည့်တန်ဆာလုပ်ကိုင်သူ များပြားလာ အပြည့်အစုံသို့
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အား ထောက်ခံသူများစုရုံး အပြည့်အစုံသို့
ရပ်ဝေးခရီးသည်များကို ကော့သောင်းလေယာဉ်ကွင်း၌ ဖမ်းဆီးပြန်ပို့နေ အပြည့်အစုံသို့
ဗန်းမော်မြို့ သွေးလွန်တုတ်ကွေးကြောင့် ကလေးငယ်များသေဆုံး အပြည့်အစုံသို့
ပြည်တွင်းလှုပ်ရှားမှု၊ စစ်အစိုးရအား အာစီယံက သတိပေးခြင်း အပါအ၀င် သတင်းမှတ်စု အပြည့်အစုံသို့
၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲမှ အပြီးသတ်ထုတ်ပယ်လို၍ ဒေါ်စုအား နေအိမ်အကျယ်ချုပ်ချ အပြည့်အစုံသို့
မွန်ကျောင်းသူ/သားများ၏ မောင်မယ်သစ်လွင်ကြိုဆိုပွဲ Lion City မှာ ကျင်းပ အပြည့်အစုံသို့
ဘုရားသုံးဆူမြို့နယ်ဒေသတွင် ဒီကေဘီအေမှ စခန်းအသစ်ဆောက် အပြည့်အစုံသို့
စစ်တွေတွင် ငလျင်လှုပ်ခဲ့သော်လည်း အပျက်အစီး မရှိ အပြည့်အစုံသို့
နအဖစစ်တပ်နှင့် ကိုးကန့်တပ်ဖွဲ့အကြား နှစ်ဘက် ပစ်ခတ်လုနီးပါး အခြေအနေဖြစ် အပြည့်အစုံသို့
မော်ဒယ်မလေး ၀တ်မှုန်ရွှေရည် မွေးနေ့ပွဲ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး၏မြေး ဖိုးလပြည့်တက်ရောက် အပြည့်အစုံသို့
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ဆိုင်းငံ့ပြစ်ဒဏ် ချမှတ် အပြည့်အစုံသို့
အင်းစိန်ထောင်ရှေ့ အခြေအနေ အပြည့်အစုံသို့
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အမှု စီရင်ချက်ချမည့်တရားခွင် အန်အယ်လ်ဒီ စီအီးစီ တက်ရောက်ရန် မရေရာသေး အပြည့်အစုံသို့
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ယနေ့ ရုံးချိန်းအခြေအနေ အပြည့်အစုံသို့
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရုံးချိန်း အင်းစိန်ထောင် ပတ်ဝန်းကျင် အခြေအနေ အပြည့်အစုံသို့
သြဂုတ်လ ၁၁၊ ၂၀၀၉ - ဒေါ်စု တရားရုံးချိန်း မနက်ခင်း သတင်းရသမျှ အပြည့်အစုံသို့
ပဲခူးတိုင်းတွင် ရေကြီးမှုကြောင့် ဒေသခံများ ဒုက္ခရောက်ကြရ အပြည့်အစုံသို့
အင်အားပြင်းငလျင်ကြောင့် ဆူနာမီ ငလျင်ရေလှိုင်းဘေး စိုးရိမ်ဖွယ်ရှိ အပြည့်အစုံသို့
အင်အားပြင်း ငလျင်တခု မြန်မာပြည်တွင် လှုပ်ခတ် အပြည့်အစုံသို့
ချောင်းရေကြီးသဖြင့် ပဲခူးရပ်ကွက်တချို့ ရေနစ်မြုပ် အပြည့်အစုံသို့
ကေအိုင်အိုက ကချင်အာဇာနည်နေ့ အခမ်းအနား ကျင်းပ အပြည့်အစုံသို့
နေပြည်တော် ရထားစီးသူ လျော့ကျ အပြည့်အစုံသို့
ယက်တော ကျန်းမာရေး ကောင်းမွန်လာ အပြည့်အစုံသို့
အန်အယ်ဒီအမတ် ထောင်ပြောင်းခံရ အပြည့်အစုံသို့
ကချင်ပြည်နယ်အတွင်း ရှစ်လေးလုံးနှစ်ပတ်လည်နေ့ ဆုတောင်းပွဲများ ပြုလုပ် အပြည့်အစုံသို့
မတည်ငြိမ်သော နိုင်ငံရေး စစ်ရေးအခြေအနေကြောင့် တာချီလိတ်မြို့ မြေဈေးတက် အပြည့်အစုံသို့
ဒီကေဘီအေ အရာရှိတဦး ကား (၃) စီး ဖျက်ဆီး၊ လူ (၃) ဦး သတ်သွား အပြည့်အစုံသို့
ကိုးကန့်တပ်ဖွဲ့နှင့် နအဖစစ်သားများ ပြဿနာဖြစ်၊ တိုင်းမှူး လာရောက်တောင်းပန် အပြည့်အစုံသို့
ဒေါ်စုလွတ်မြောက်ရေး ၀တ်ပြုဆုတောင်းမှုများဖြင့် ပါဝင်ရန်တိုက်တွန်း အပြည့်အစုံသို့
စိုက်ပျိုးရေးသန်းခေါင်းစာရင်း ကောက်မည် အပြည့်အစုံသို့
ရိုဟင်ဂျာများကို ပြန်ခေါ်ရန် နအဖကို ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် တောင်းဆို အပြည့်အစုံသို့
အင်းစိန်က နာရေးကူညီမှုလုပ်ငန်း နှောင့်ယှက်ခံရ အပြည့်အစုံသို့
မနက်ဖြန် ဒေါ်စုအမှု စီရင်ချက်အလားအလာနှင့် ပတ်သက်၍ သူ့ရှေ့နေများပြော အပြည့်အစုံသို့
လျှပ်စစ်မီးပဲ မှန်မှန်လာအောင် ကြိုးစားပါဦး အပြည့်အစုံသို့
အီရတ် ဗုံးပေါက်ကွဲမှုများကြောင့် လူ ၄၆ ဦး သေဆုံး အပြည့်အစုံသို့
အပစ်ရပ် ကိုးကန့်အဖွဲ့ တင်းမာမှု ဖြေရှင်းရေး စစ်အစိုးရနဲ့ တွေ့ဆုံဖို့ ငြင်းဆို အပြည့်အစုံသို့
ရိုဟင်ဂျာတွေ ဌာနေ ပြန်ပို့နိုင်ရေး ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် ကုလသမဂ္ဂ အကူအညီတောင်း အပြည့်အစုံသို့
မစုစုနွေး ခန္တီးထောင် ပြောင်းရွှေ့ခံရ အပြည့်အစုံသို့
မက်ဆီကို ထိပ်သီးဆွေးနွေးပွဲ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးကိစ္စဆွေးနွေး အပြည့်အစုံသို့
ပြင်းအား ၇.၆ ငလျှင် မြန်မာနိုင်ငံအနီး လှုပ်ခတ် အပြည့်အစုံသို့
နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားများကို ထောင်တွင်းပြစ်ဒဏ်ထပ်ချ အပြည့်အစုံသို့
ဘိန်းခန်းများ နှိမ်နင်းသဖြင့် မူးယစ်ဆေးဝါးဈေး သုံးဆတက် အပြည့်အစုံသို့
စစ်တောင်းမြစ်ရေကြီးပြီး စိုးရိမ်ရေမှတ်ကျော် အပြည့်အစုံသို့
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် စီရင်ချက်ကို ကြားနာခွင့် NLD ဗဟိုကော်မတီတောင်းဆို အပြည့်အစုံသို့
NLD ဗဟိုကော်မတီဝင် ဦးဝင်းတင်အား ပြောင်းရွှေ့နေထိုင်ခွင့် ကန့်သတ်ပိတ်ပင် အပြည့်အစုံသို့
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို အားပေးသူ ထောင်နှစ်နှစ် စီရင်ခံရ အပြည့်အစုံသို့
စစ်တောင်းမြစ်ရေ စိုးရိမ်ရေမှတ်အထက် ဆက်လက်ရှိနေဆဲ အပြည့်အစုံသို့
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို ထိန်းသိမ်းထားခြင်းကြောင့် နိုင်ငံတကာ အကူအညီ လျော့ပါးစေ အပြည့်အစုံသို့
အာဖဂန် မူးယစ်ခေါင်းဆောင်တွေကို အမေရိကန် ပစ်မှတ်ထား အပြည့်အစုံသို့
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အမှုကို ဒီကနေ့ စီရင်ချက်ချမည် အပြည့်အစုံသို့
တခါသုံး နှစ်ဆယ်တန် ဆင်းကဒ်များ ၀ယ်မရ အပြည့်အစုံသို့
ဘင်္ဂလားဒေ့ခ်ျ သမ္မတဟောင်းက မြန်မာ့ ဒီမိုကရေစီရေး ကိုထောက်ခံ အပြည့်အစုံသို့
ဦးဥတ္တမနေ့ အကြို လှုပ်ရှားမူ စစ်တွေတွင် ပြုလုပ် အပြည့်အစုံသို့
အင်္ဂလိပ် ဘာသာ တင်ဆက် ဗဟုသုတ အတွက်
Aung San Suu Kyi sentenced to 18 months Read more
Aung San Suu Kyi’s conviction sparks global outcry Read more
Suu Kyi Sentenced to 18 Months House Arrest Read more
Bangladesh Tells Burma to Improve Rohingyas’ Lives Read more
50 Briefly Detained during Suu Kyi Trial Read more
Burma: Aung San Suu Kyi Verdict ‘Reprehensible’ Read more
Nobel Laureate Suu Kyi Found Guilty in Burma Read more
Malaysia charges 1, nabs3in trafficking raids Read more
Big quake hits off India's Andamans, no tsunami Read more
EU vows 'targeted measures' over Suu Kyi verdict Read more
PM 'angry' at Aung San Suu Kyi guilty verdict Read more
Suu Kyi, and American Intruder Convicted by Burmese Court Read more
Suu Kyi ordered back into house detention Read more
World Leaders Blast Burma for Suu Kyi Sentence Read more
Brown slams Burma junta over Suu Kyi house arrest Read more
Martin condemns conviction of Aung San Suu Kyi Read more
Reaction: Aung San Suu Kyi trial Read more
Burma: Amnesty labels Aung San Suu Kyi's sentence as 'shameful' Read more
Aung San Suu Kyi can relax: Ivan Lewis has condemned her sentence Read more
Philippine government deplores Suu Kyi's guilty verdict Read more
Smith condemns Suu Kyi sentence Read more
Burma Court Finds Suu Kyi Guilty Read more
Myanmar's Suu Kyi stillapotent force for change Read more
France demands tougher EU sanctions on Myanmar Read more
Is Myanmar joining nuclear club with North Korea aid? Read more
Sarkozy calls for EU sanctions against Myanmar junta Read more
Suu Kyi gets more time, plus hard labour Read more
Arms embargo urged as Burma junta sentences democracy leader Read more
Suu Kyi Sentence Stirs World Outrage Read more
Myanmar's Suu Kyi gets 18 months under house arrest Read more
Myanmar's Suu Kyi found guilty in security case Read more
American found guilty of entering Suu Kyi's home Read more
Prison transfer for detained opposition member Read more
Palpable tension between Burmese Army and Kokant rebels Read more
Tsunami alert on South Asia cancelled Read more
7.6 magnitude quake hits Indian Ocean Read more
$500m Burma arms deal: Real or imagined? Read more
Calls to intensify pressure on Burma regime Read more
Big quake hits off Andamans, no tsunami Read more
Burma's Suu Kyi set for verdict hearing Read more
American in Suu Kyi trial leaves Myanmar hospital Read more
Myanmar Dissidents Contemplate Concessions Read more
Aung San Suu Kyi, Myanmar's detained opposition leader, has been found guilty of violating an internal security law byacourt in the former capital, Yangon. Announcing its verdict on Tuesday the court sentenced her to three years in prison but that was immediately reduced to 18 months on the orders of the military government, which said she could serve the time in her Yangon home. The Nobel laureate was charged with breaching the terms of her house arrest following an incident in which an American man, Jonh Yettaw, swam acrossalake to reach her residence in May. Earlier the opposition leader's lawyers said the 64-year-old had been "preparing for the worst" and diplomats had also predicted that the court at Yangon's Insein prison would hand downaguilty verdict afteratwo-and-a-half-month trial. Critics have accused Myanmar's military government of using the intrusion at her lakeside home by American John Yettaw as an excuse to keep her locked up during elections that are due in 2010. Aung San Suu Kyi's lawyers - who have not contested the facts of the case - had argued that the law used by the authorities is invalid because it applies toaconstitution abolished two decades ago. They also said that government guards stationed outside Aung San Suu Kyi's compound should be held responsible for any intrusion in her property. Security In depth Ahead of Tuesday's verdict security was stepped up across Yangon and police trucks patrolled the streets overnight, witnesses said. The move follows warnings in the country's state media against any protests in case ofaguilty verdict. The case has drawnastorm of international criticism of Myanmar's military government, which is already targeted by US and European Union sanctions for its detention of more than 2,000 political prisoners including Aung San Suu Kyi. Myanmar's ruling generals have kept Aung San Suu Kyi in detention for nearly 14 of the last 20 years, ever since they refused to recognise her National League for Democracy's (NLD) landslide victory in elections in 1990. Myanmar has been under military rule since 1962 and the generals have shown no sign of releasing their iron grip.
Posted by Sanghaalliance at 10:45 PM